အသက် ၇၃ နှစ်အရွယ် ဦးစိုင်းအောင်ညွှန့် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း အင်တာနက်ကနေသာ ကြည့်မည်ဟုဆို - POPPIN NEW
June 7, 2019 ဗဟုသုတ
၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုသည့် အသက် ၇၃ နှစ်အရွယ် ဦးစိုင်းအောင်ညွန့်သည် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကို အင်တာနက်ကနေသာကြည့် ရှု့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျောင်းကိုသွား မကြည့်တော့ဘူး၊ အင်တာနက်ကနေကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ အိမ်မှာပဲ ကြည့်တော့မယ်”ဟု ဦးစိုင်းအောင်ညွှန့် က ပြောသည်
အသက် ၇၃ နှစ်အရွယ် အဘိုး ဦးစိုင်းအောင်ညွှန့်သည် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မြန်မာဘာသာရပ်ကို ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် အမှတ် ၅ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဖြေဆိုခဲ့သည်။
အမှတ် ၅ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတွင် စာဖြေခန်း ၂၇ ခန်း ကျောင်းသား ၈၀၀ လာရောက်ဖြေဆိုရာတွင် ဦးစိုင်းအောင်ညွှန့် ပါဝင်ခဲ့သည်
၂၀၁၉ – ခုနှစ် ၊ မတ်လအတွင်းက ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကို ဇွန် ၈ ရက် စနေနေ့ နံနက် ၆ နာရီတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမည် ဖြစ်သည်
အဆိုပါ အောင်စာရင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ သက်ဆိုင်ရာ စာစစ်ဌာနကျောင်းများတွင် တစ်ချိန်တည်း ကပ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အင်းစိန်မြို့နယ် အမှတ်(၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် အမှတ်(၁)အခြေခံ ပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် အမှတ်(၂)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် အမှတ်(၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် အမှတ်(၂) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် အမှတ်(၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတို့တွင်လည်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ အောင်စာရင်းများကို ကပ်ထားပေးမည် ဖြစ်သည်
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် အောင်စာရင်းများအား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးများတွင် လည်းကောင်း၊ ခရိုင်အလိုက် သိရှိလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံး များတွင် လည်းကောင်း ၊ မြို့နယ်အလိုက် သိရှိလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများတွင် လည်းကောင်း ဇွန် ၈ ရက် နံနက် ၆ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင် ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်မည့် ဇွန် ၈ ရက် နံနက် ၆ နာရီတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန Website ဖြစ်သော www.moe.gov.mm နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန Website ဖြစ်သော www.myanmarexam.org တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Photo- Myanmar Digital News
Myanmar Digital News လေးစားစွာ Credit. ပေးပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှဈ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲကို ဖွဆေိုသညျ့ အသကျ ၇၃ နှဈအရှယျ ဦးစိုငျးအောငျညှနျ့သညျ စာမေးပှဲ အောငျစာရငျးကို အငျတာနကျကနသောကွညျ့ ရှု့မညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“ကြောငျးကိုသှား မကွညျ့တော့ဘူး၊ အငျတာနကျကနကွေညျ့လို့ရတယျဆိုတော့ အိမျမှာပဲ ကွညျ့တော့မယျ”ဟု ဦးစိုငျးအောငျညှနျ့ က ပွောသညျ။
အသကျ ၇၃ နှဈအရှယျ အဘိုး ဦးစိုငျးအောငျညှနျ့သညျ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ မွနျမာဘာသာရပျကို ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ အမှတျ ၅ အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျးတှငျ ဖွဆေိုခဲ့သညျ။
အမှတျ ၅ အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျးတှငျ စာဖွခေနျး ၂၇ ခနျး ကြောငျးသား ၈၀၀ လာရောကျဖွဆေိုရာတှငျ ဦးစိုငျးအောငျညှနျ့ ပါဝငျခဲ့သညျ။
၂၀၁၉ – ခုနှဈ ၊ မတျလအတှငျးက ကငျြးပစဈဆေးခဲ့သော တက်ကသိုလျဝငျ စာမေးပှဲအောငျစာရငျးမြားကို ဇှနျ ၈ ရကျ စနနေေ့ နံနကျ ၆ နာရီတှငျ ထုတျပွနျကွညောမညျ ဖွဈသညျ။
အဆိုပါ အောငျစာရငျးမြားကို သကျဆိုငျရာ မွို့နယျအသီးသီးရှိ သကျဆိုငျရာ စာစဈဌာနကြောငျးမြားတှငျ တဈခြိနျတညျး ကပျထားမညျဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ အငျးစိနျမွို့နယျ အမှတျ(၁) အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျး၊ ရနျကငျးမွို့နယျ အမှတျ(၁)အခွခေံ ပညာအထကျတနျးကြောငျး၊ စမျးခြောငျးမွို့နယျ အမှတျ(၂)အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျး၊ လမျးမတျောမွို့နယျ အမှတျ(၁) အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျး၊ ဒဂုံမွို့နယျ အမှတျ(၂) အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျးနှငျ့ သင်ျကနျးကြှနျးမွို့နယျ အမှတျ(၁) အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျးတို့တှငျလညျး တိုငျးဒသေကွီး/ ပွညျနယျမြား၏ အောငျစာရငျးမြားကို ကပျထားပေးမညျ ဖွဈသညျ။
တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျအလိုကျ အောငျစာရငျးမြားအား သကျဆိုငျရာ တိုငျးဒသေကွီး/ ပွညျနယျ ပညာရေးမှူးရုံးမြားတှငျ လညျးကောငျး၊ ခရိုငျအလိုကျ သိရှိလိုပါက သကျဆိုငျရာ ခရိုငျပညာရေးမှူးရုံး မြားတှငျ လညျးကောငျး ၊ မွို့နယျအလိုကျ သိရှိလိုပါက သကျဆိုငျရာ မွို့နယျပညာရေးမှူးရုံးမြားတှငျ လညျးကောငျး ဇှနျ ၈ ရကျ နံနကျ ၆ နာရီနောကျပိုငျးတှငျ စုံစမျးမေးမွနျးနိုငျ ကွောငျး ပညာရေးဝနျကွီးဌာနမှ ထုတျပွနျထားသညျ။
အောငျစာရငျးထုတျပွနျမညျ့ ဇှနျ ၈ ရကျ နံနကျ ၆ နာရီတှငျ ပညာရေးဝနျကွီးဌာန Website ဖွဈသော www.moe.gov.mm နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ စာစဈဦးစီးဌာန Website ဖွဈသော www.myanmarexam.org တှငျ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျရနျ စီစဉျထားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
Myanmar Digital News လေးစားစှာ Credit. ပေးပါသညျ။
လူငယ်များအတွက် ငွေစုဆောင်းရန် နည်းလမ်း (5)မျိုး
Pop Pin New February 17, 2019
မူးယစ်ဆေးစွဲတဲ့ ဘဝကနေ ပြန်လည်ရုန်းထွက်လာနေရတဲ့ (၁၁)နှစ်အရွယ် သမီးငယ် မငွေစင်(ရုပ်သံ)
Pop Pin New July 14, 2019
လူတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်းသတိရနေတဲ့အခါ သင့်ဘက်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်အရာ(၆)မျိုး
Pop Pin New February 7, 2019